ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ Online ငွေရှာခြင်းကို စတင်မယ်။ | Myanmar News Agency
Internet knowledge news Uncategorized
ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ Online ငွေရှာခြင်းကို စတင်မယ်။
Posted By: Decem Six0Comment knowledge, news
ပထမဆုံးအကြံပေးချင်တာက ဆိုဒ်ပေါင်းများစွာမှာလျောက်မလုပ်မိဖို့ပါပဲ … ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိပြန်ရမယ့်ငွေ( satoshi ) ထက်ပိုပြီးဖုန်းဘေဖိုးပိုကုန်ပါလိမ့်မယ် … wifi free ရလို့ဆိုရင်တော့ ကြိုက်သလောက်လုပ်ပါ … မိမိဖုန်းဘေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Mobile data အသုံးပြုမှုနဲ့ပြန်တွက်ပြီးမိမိအတွက်အမြတ်ကျန်မယ့်ဆိုဒ်မျိုးတွေမှာသာလုပ်သင့်ပါတယ်… ခု Beginners တွေစတင်ငွေရှာတော့မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလုပ်သင့်တဲ့ဆိုဒ်၃ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
တစ်နာရီတစ်ခါ satoshi free ပေးပါတယ် … တစ်ခါ free ပေးရင် $200 (နှစ်သိန်းကျပ်ဝန်းကျင်)ထိကံစမ်းနိုင်မှာပါ.. တစ်ပတ်တစ်ခါ ထီဖောက်ပေးပါတယ် .. ထီလက်မှတ်ကတော့ တစ်နာရီတစ်ခါ Free claimတိုင်းထီလက်မှတ်နှစ်စောင်အလကားပေးပါတယ် … Free ပေးတဲ့ satoshi နဲ့ထီလက်မှတ်ပြန်ဝယ်ပြီး ကံစမ်းနိုင်ပါတယ် … နောက်တစ်ခုက bet ကစားနိုင်ပါတယ် … တစ်ပတ်တစ်ခါ ထီဖောက်ပေးလို့ First Prize သာပေါက်လို့ကတော့ မြန်မာငွေ ၁၅သိန်းလောက်ရမှာပါ … အရမ်းကောင်းပြီး မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုပါ …
Sign Up & Get Free >> http://freebitco.in/?r=2091828
Android ဖုန်းမှာ အလွယ်တကူ ၁၀မိနစ်တစ်ခါ satoshi free ယူနေလို့ရပါတယ် … mobile data လဲသိပ်မကုန်ပါဘူး ….
Download >> https://bnc.lt/a/key_live_adp3h6bryRmP5niYwRv9aihbvqdG6AAY…
3. Bitcoin Maker
30 မိနစ်တစ်ခါ satoshi 500 free ပေးပါတယ် ….ဖုန်းမှာ Install လုပ်ပြီး အလွယ်တကူ satoshi free ယူနေရုံပါပဲ
Download >> http://pc.cd/0VuctalK
အသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ် ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ >>> http://bitcoin-myanmar.blogspot.com/…/blockchain-game-block…
“ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ”စာအုပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဝီရိယကောင်းပုံကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်
သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသောသင်္ဘောပေါ်မှ စက်သုံးဆီများခိုးယူသူအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ရန်ကုန်-ပြည် ခရီးသည်တင်ယာဉ် လမ်းဘေးသစ်ပင် ဝင်တိုက် ခရီးသည်များစွာဒဏ်ရာရ
July 8, 2018 MUNA 0
မြောင်းမြတံတားကျိုးကျရသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
April 4, 2018 Zack 0
ကောလင်းမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် သိန်း ၁,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းမိ
Today's Visits: 31,717
Last 365 Days Visits: 21,671,420
Total Visits: 32,316,116